samedi, 25 janvier 2020 22:49
Seranam-piaramanidina Ivato: Hentitra ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo olona mivoaka sy miditra an’i Madagasikara
Nidina ifotony teny amin'ny Seranam-piaramanidina Ivato androany sabotsy 25 janoary ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka Pr Julio Rakotonirina, nitarika ny ekipa avy ao amin'ny Ministera, nijery ny fanatanterahina ireo fepetra noraisina amin'ny fisorohana ny tsy hidiran'ny "Coronavirus" eto Madagasikara.
Hentitra ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo olona mivoaka sy miditra eny anivon'ireo seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo eto Madagasikara.
Tontosa androany sabotsy 24 janoary, tao amin’ny Tranompokonolona Antsirabe ny fikaonandoham-paritra ho fakan-kevitra hampandrosoana ny baolona kitra eto Madagasikara, anjaran’ny ligin’ny baolina kitra Vakinankaratra. Nitarika ny delegasionan’ny Federasiona Malagasin’ny baolina Kitra nanotrona izany teto an-toerana ny filohany, Atoa Arizaka Rabekoto Raoul.
Ireo misehatra ny baolina kitra no nasaina tamin’ity, nahitana toeram-panofanana sy ny sekolin’ny baolina kitra eto Vakinankaratra, ireo seksiona niisa 7, ary ireo klioba sy mpitantana klioba.
samedi, 25 janvier 2020 20:48
Antananarivo Renivohitra: Nahazo komandy vaovao ny Polisy monisipaly sy ny Mpamonjy Voina
Natao androany, sabotsy 25 janoary teo amin’ny « parvis » Analakely ny lanonana ara-miaramila famindrampahefana teo amin’ny vondrona Polisy Monisipaly sy ny Mpamonjy voina ho an’ny Antananarivo Renivohitra.
Ny Commissaire Principal de Police Ostrom Whenss, manomboka izao no lehiben'ny Polisy Monisipaly, ary ny Lieutenant Colonel Razafimanahaka Tiana no lehiben'ny vondrona Mpamonjy Voina
Nilaza ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina fa hanampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindra ara-pitaovana. « Ho hentitra aho amin'ny tsy fanarahan-dalàna », hoy izy.
samedi, 25 janvier 2020 20:40
Takaitran’ny andro ratsy: 31 namoy ny ainy, 9 tsy hita popoka, 106 846 ireo traboina
Mavesatra ny fahavoazana nateraky ny andro ratsy nitondra rotsak’orana niteraka tondradrano sy nahasimbana fotodrafitrasa maro nanomboka tamin’ny 19 janoary teo.
Raha ny tatitra vonjimaika nataon’ny BNGRC ny fiafaran’ny tolakandro teo dia tafakatra 31 ny isan’ny olona namoy ny ainy, ka tao amin’ny Distrikan’i Mitsinjo ny 14 amin’ireo ary tao amin’ny Distrikan’i Maevatanana ny 9. Miisa 9 hatreto ny olona tsy hita popoka ary 106 846 ireo traboina.
Efitranon-tsekoly miisa 67 no potika tanteraka, 28 hafa nisy fahasimbana. Miisa 18 ireo sekoly nampiantranoana ireo traboina. Manodidina ny 6 600 ireo ankizy tsy afa-mianatra.
samedi, 25 janvier 2020 19:58
Lany ny tahirin-tsolika: Tanan-dehibe maro no voatery mampihatra fanapahan-jiro mifandimby
Tanàna maromaro no misedra olana amin'ny famokarana herinaratra vokatry ny andro ratsy izay mampananosarotra ny fivezivezen'ny kamiao mpamatsy solika noho ny lalana ratsy na tapaka mihitsy.
Ritra ny tahirin-tsolika ao amin’ny foibe famokarana herinaratra any Morafenobe Faritra Melaky, ka tapaka tanteraka ny herinaratra noho ny fiara mitondra solika mikatso anaty lalan-dratsy. Mety ho ny fiandohan’ny herinandro iny vao ho tonga any an-toerana ny solika.
Tanàna maro toa an’i Soalala, Besalampy, Andilamena, Ambatondrazaka, Ambatomainty, Tsaratanana, Bealanana, Analalava, Mampikony ary Mandritsara no voatery mampihatra fanapahan-jiro mifandimby vokatry ny fahatapahan'ny lalam-pirenena ka miteraka fahataran'ny famatsiana solika.
samedi, 25 janvier 2020 19:44
RN 33A – Tsaratanana: Mirotsaka manarina lalana simba ny Miaramilan’ny 322 Compagnie ny 2RM3
Tapaka eo amin'ireo Fokontanin'i Ambolosy sy Andranonampaga eo anivon'ny Kaominina Ambakireny Distrikan'i Tsaratanana ny RN 33A, vokatry ny andro ratsy nitondra orambe farany teo
Mandray andraikitra feno manoloana ny voina izay mitranga amin'ny fanamboarana ny lalana ny miaramila avy ao amin’ny 322 Compagnie ny 2RM3, araka ny toromariky ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena.
samedi, 25 janvier 2020 19:18
Antsirabe: « Ben'ny tanàna mitovy fijery amin'ny mpitondra no misy izao »
Tontosa, androany, ny fametrahana samboady ny Ben'ny tanàna vaovao ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe, Rasamimanana Honoré. Ny Minisitry ny serasera sy ny fifandraisana, Lalatiana Rakotondrazafy, no nisolotena ny fitondram-panjakana foibe nametraka azy tamin'izany toerana izany, notronin'ireo solombavambahoaka voafidy tato Vakinankaratra, ary isan'izany ny tompon-tanàna dia ny depiote Jean François Michel.
Nambaran'ity farany fa « tsy hijerena loko politika ny fampandrosoana an'Antsirabe ka dia vonona hifanome tanana izy ireo ». Nankasitrahan'ny minisitra izany ary nambarany fa « Ben'ny tanàna mitovy fijery amin'ny mpitondra no misy izao ka tsy afaka hiala olana amin'izay izy ireo ».
Ho fisantarana izany fiaraha-miasa izany dia nanolotra fiarabe mpitaona fako sy dabam-pako niisa folo, ho an’ny tanànan’Antsirabe, ny fanjakana foibe.
samedi, 25 janvier 2020 18:46
Fanampiana ny traboina: Nitondra ny anjara birikiny ny Ministeran'ny Mponina
Nitondra fanampiana ho an’ireo faritra miisa fito, izay lasibatry ny rano be vokatry ny andro ratsy iny, ny Ministeran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy, amin’ny maha mpiahy ny mponina azy voalohany.
Nanatitra vary 4 taonina, miampy akanjo 2 fatorana, ho an’ireo traboina teny amin’ny biraon’ny BNGRC Antanimora, ny ministera, androany sabotsy 25 janoary. Tonga teny an-toerana nanolotra izany ny Minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy Naharimamy Lucien Irmah, nanao ohatra hitarika an’ireo malala-tanana.
samedi, 25 janvier 2020 18:40
Voina noho ny andro ratsy: « Vonjeo Ambatoboeny Tompoko », hoy Rakoto Jean Valérien, Ben’ny tanàna
Distrika isan’ny nitondra takaitra vokatry ny fandalovan’ny andro ratsy farany teo Ambatoboeny. Potika ny fambolena toy ny vary, katsaka,voanjo. Maro ny biby fiompy lasan'ny rano. Tapaka ny tetezana eo anelanelan'i Soaniaviana sy Ankijabe. Simba ny lalam-pirenena faha-33 bis.
« Vonjeo Ambatoboeny Tompoko », hoy Rakoto Jean Valérien, Ben’ny tanànan’Ambatoboeny. Miantso ny Filoha sy ny Governemanta ity farany « ho tonga sy hitondra vahaolana, fa indrindra ny sakafo sy ny fanafody ».